Bulshada Ku dhaqan Dhoobley ee G/J/Hoose oo ka faa’iideysanaya taageerada ciidamada AMISOM – Balcad.com Teyteyleey
Bulshada Ku dhaqan Dhoobley ee G/J/Hoose oo ka faa’iideysanaya taageerada ciidamada AMISOM
By Maxamuud Axmed	 On Oct 7, 2017
Dadka ku nool ku nool Dhobley, gobolka Jubbada Hoose ee koonfur-galbeed Soomaaliya ayaa ka faa’iideystey dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada Difaaca Kenya (KDF), oo hoos imaanaya Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Ciidanku waxay qabteen xeryo caafimaad, cusbooneysiin dugsiyada, isbitaallada, goobaha cibaadada iyo inay ku deeqaan qalab waxbarasho, iyagoo taageero ka helaya beelaha baahida ka hooseeya masuuliyadooda.
Ciidamadii Sector II, oo xarunteedu tahay Dhobley, ayaa abaabulay xero caafimaad oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka deegaanka Busaar, halkaasoo ay ku daweeyeen xanuuno caadi ah ayna sameeyeen qalliin yar.
Ciidamada ayaa sidoo kale ku deeqay qalab dhisme ah oo lagu dayactirayo Masjid ku yaal Busaar; nuqullada Quraanka kariimka ah iyo nidaamka cinwaanka dadweynaha – oo ay isticmaali doonaan dadka deggan inta lagu jiro kulannada bulshada.
Dugsiga Wamo Primary and Secondary School oo ku yaala magaalada Dhobley, ciidamada ayaa rinji ka ah albaabka dugsiga iyo derbiga wareega waxana ay ku deeqeen in ka badan 100 miisaan, iyo sidoo kale boorso buug. Iskuulku wuxuu leeyahay 350 arday.
Taliyaha Qeybta AMISOM-KDF Brigadier William Shume, maamulka dugsiga iyo hoggaamiyeyaasha maxalliga ah ayaa ka soo qayb-galay xaflad wareejinta qalabka waxbarasho.
Cabdalle Birole oo ah, qaybtaas, shaqaalaha caafimaadka ee KDF ayaa bixiyay baaris caafimaad oo bilaash ah isla markaana waxay siiyeen daaweyn dadka deegaanka ah.
Bilihii ugu dambeeyay, kooxda Keenyaanka ah ee Kenya ayaa sidoo kale iskaashatey maamulka degaanka si loogu qeybiyo sahayda gargaarka iyo biyaha la cabo ee bulshooyinka ay saameeyeen abaarta gobolka.
Ciidamada ayaa sidoo kale taageera milkiilayaashooda ku sugan Ciidanka Qaranka Soomaaliya (SNA), si ay uga shaqeeyaan xayndaabka iyo xayiraadda xeryaha SNA, si looga hortago qalabka loo yaqaan “Explosive Explosive Devices” (VBIEDs) oo ka soo horjeeda jagooyinka difaaca.
Dhanka kale AMISOM waxaa ka go’an ilaalinta iyo hagaajinta heerarka nololeed ee Soomaalida ku baahsan koonfurta dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan meelaha ay ku yaalaan xarumaha ay ka shaqeeyaan.
The post Bulshada Ku dhaqan Dhoobley ee G/J/Hoose oo ka faa’iideysanaya taageerada ciidamada AMISOM appeared first on Ilwareed Online.
Wasiiradda Arrimaha Gudaha Filand oo magaalada Helsinki kula Kulantay Wasiir Juxa